Inoshandiswa zvakanyanya mumishini, foundry, simbi, kemesitiri, zvishandiso, simba, kuchera, uye zvimwe zvikamu zveindasitiri, Apron Conveyer yemuenzaniso BLT mhando yechinangwa chikuru chakamira michini yekufambisa. Inoshandiswa mukutakura kweakakura akapararira zvinhu kana huremu hwechimwe-chidimbu kunyanya kuchinjika kune zvigadzirwa zvehombe vhoriyamu, kupinza, kurema-huremu, kupisa kwakanyanya uye ngura. Zvichakadaro, maitiro akadai sekutonhora, kuomesa, kupisa, kutsvaira uye kusarudzika zvinogona kuitwa panguva yekufambisa
Nguva yekutora mazuva makumi matatu uchinge wagamuchira dhipoziti
Apuroni yekufambisa mhando yeplate inoendesa michina. Iyo mbishi yekugadzirisa zvinhu kana inoenderera yekugadzira michina yekushandisa.
Apron conveyer ivhu rinotakura, inogona kuve yakatwasuka, inoteedzera kutungamira kwechinhu chinotakura. Iyo inoendesa michina yeplate cheni traction element, kwete chete simba hombe, rakanyanya kushanda, rakavimbika basa.
Pashure: China chakakombama vachikanda muchina Squeezing jecha Kukanda flaskless richigadzirisa Line
Chinwiwa Mould Machine, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Richigadzirisa vachikanda chinu, Sandbox, Punch Out Muchina, Chinwiwa richigadzirisa,